Akụkọ - 2018 Sichuan Ju Neng Autumn Canton Fair kwụsịrị nke ọma
2018 Sichuan Ju Neng Autumn Canton Fair kwụsịrị nke ọma
N'elekere isii nke abalị na Nọvemba 4, 2018, Emechara ngosi nke Canton nke mgbụsị akwụkwọ, nke Sichuan Ju Neng gara, mechiri nke ọma!
Ihe ngosi ahụ were ụbọchị 5 wee nata ngụkọta nke ndị ahịa 127 si mba ofesi sitere n'akụkụ ụwa niile.Ndị ahịa ahụ gosipụtara mmasị dị ukwuu na ngwaahịa agbaze agbaze na-abụghị nke a kpara akpa ma gosipụta mkpa ịzụrụ ha.Ụlọ ntu a dị n'ụlọ ezumezu akụrụngwa ahụike.Ọtụtụ n'ime ndị ahịa bụ ahụike.Ndị ọkachamara n'ọhịa nwere ikike dị ukwuu n'ahịa ọgwụ na-adịghị akwa ákwà.
Nke mbụ, nkesa ndị ahịa
Ndị ahịa bịara n'ụlọ ntu ahụ kacha dị na Middle East, Southeast Asia, South America na Australia.N'ime ha, Indonesia, Singapore, India na ndị ahịa ndị ọzọ nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, ndị ahịa si n'ụwa nile nwere ezigbo enyi, na 80% nke ndị ahịa na-eji China WeChat ọrụ maka nkwurịta okwu kwa ụbọchị.Soro na-enye mma.
Nke abụọ, ọchịchọ nke ngwaahịa anaghị kpara akpa
N'ime ihe mkpuchi na-agbaze agbaze, ihe mkpuchi mmiri ọgwụ na-amị amị, ihe mkpuchi, owu na-amị mmanụ, akwa nhicha na ngwaahịa anaghị kpara akpa, ihe mkpuchi ahụ, ọkachasị ihe mkpuchi a na-ebipụta nke ọma, nwere ọtụtụ ndị ahịa, na-esote ya na-aṅụ ọbara ọgwụ. mpe mpe akwa.Nhicha nhicha, ọtụtụ ndị ahịa anatala ihe nlele iji gosipụta ebumnuche imekọ ihe ọnụ ogologo oge.
Nke atọ, mgbasa ozi uru ọha
Site na uru nke Sichuan Ju Neng dị ka onye na-emepụta ihe, ngwá ọrụ a na-ebubata dị ka ihe ndabere maka ịdị mma kwụsiri ike, uwe na-agbaze agbaze na-ejikọta California's electret masterbatch, nke na-eme ka ihe ahụ rụọ ọrụ maka afọ 3-5, dị mma karịa ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ nwere ike ịzọpụta naanị. .N'ime obere oge nke ọnwa 5, teknụzụ mbipụta pụrụ iche enwetawokwa nke ọma.Site na uru ndị a, anyị ga-eme ka obi ike nke ndị ahịa anyị na imekọ ihe ọnụ anyị.
Sichuan Jueneng Filter Materials Co., Ltd natara ọtụtụ ndị ahịa ochie na ihe ngosi ahụ.Ndị ahịa ahụ gosipụtara afọ ojuju na mmekorita gara aga ma tinye ụfọdụ echiche ndị ọkachamara iji mee ka mmekorita dịkwuo mma.Ihe ngosi a na-ewu ewu nke ukwuu ma bụrụ naanị ebe ngosi nka akụrụngwa ahụike.Onye na-emepụta ákwà na-emepụta ihe na-adịghị akwa ákwà, ihe ngosi a arụpụtala ezigbo ihe, hụ gị oge ọzọ na Canton Fair!
Maka ozi gbasara ngwaahịa agbaze agbaze, kpọtụrụ Nwada Li: +86 18116628077
Oge nzipu: Mee-28-2021
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Ihe mkpuchi mkpuchi China, Ihe mkpuchi PPE, Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi ihu,